I-Hebei Juxing international trade co., Ltd., yasungulwa ngo-Agasti 2019, esendaweni esebenzayo ye-jize echwebeni le-qingdao freetrade, iseduze nomzila wesitimela we-hanhuang kanye nomgwaqo wesifundazwe ongu-311.318, ukuhamba kwezimoto kuhambisana kakhulu, inzuzo yendawo iyabonakala.
Sinomugqa womhlangano othuthukisiwe wamazwe omhlaba kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza, uhlelo lokulawulwa kwekhwalithi oluqinile.
I-Hydrazine hydrate, i-Cas 7803-57-8
I-Hebei Juxing international trade co., Ltd., yasungulwa ngo-Agasti 2019, esendaweni esebenzayo ye-jize echwebeni le-qingdao freetrade, iseduze nomzila wesitimela we-hanhuang kanye nomgwaqo wesifundazwe ongu-311.318, ukuhamba kwezimoto kuhambisana kakhulu, inzuzo yendawo iyabonakala. .
1. I-Bwe inesisekelo esikhulu sokukhiqiza esingu-5000+m2.
2. Gcwalisa uhlelo lokuhlola ikhwalithi.
3. Ukusekelwa kwethimba le-R&D lochwepheshe.
4. Ithimba labadayisi eliqeqeshwe kahle, isevisi engama-24/7.
Sinesizinda sokukhiqiza esikhulu esingu-5000 + m2. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emhlabeni wonke. Siyakwamukela ukubambisana nathi.
Ngomugqa womhlangano othuthukile wamazwe omhlaba kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza, uhlelo oluqinile lokulawulwa kwekhwalithi
Itholakala e-Qingdao, eduze nomgwaqo wesitimela nowesifundazwe, ezokuthutha ezilula, izinzuzo ezisobala zendawo.
Selokhu yasungulwa, imboni yethu ibilokhu ithuthukisa imikhiqizo esezingeni lomhlaba ngokulandela umgomo wekhwalithi kuqala. Imikhiqizo yethu izuze idumela elihle kakhulu embonini kanye nokwethembeka okubalulekile phakathi kwamakhasimende amasha namadala..